Nepal Deep | आज र भोलिको मौसम कस्तो रहला ?
आज र भोलिको मौसम कस्तो रहला ?
काठमाडौँ। आज र भाेलि हिजो-अस्तिको जस्तो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । मनसुनको न्यूनचापीय क्षेत्र वायुमण्डलबाट केही तलतिर सरेकाले पानी कम पर्ने अनुमान गरिएको मौसमविद् सजिना शाक्यले बताएकी छिन् ।
उनका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय क्षेत्र तलतिर सर्दा नेपालमा कम र भारतमा धेरै पानी पर्ने हुन्छ । तर यसले मात्रै मनुसुनी गतिविधिलाई निर्धारण भने नगर्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । आज भन्दा भोलि अझ मौसम खुल्ने सम्भावना छ । लगातार झरी नपरे पनि हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भने हुने मौसमविद् सजिना शाक्यले जानकारी दिएकी छिन् । उनका अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ ।
टोकियो ओलम्पिकमा जापान १० स्वर्णसहित शीर्ष स्थानमा
टोकियो ओलम्पिकमा एलेक्सले सुधारे राष्ट्रिय कीर्तिमान
टोकियो ओलम्पिकमा जापानलाई पछि पार्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा उक्लियो
टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्सले आज प्रतिस्पर्धा गर्ने
अफ्रिदीले ईपीएलमा काठमाडौं किंग्स एलेभेनबाट खेल्ने
फुटबल राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामा घोषणा